အာဏာရ ပါတီ ၏ ညီလာခံ ကျင်း ပနေ ချိန် တွင် နိုင်ငံ အနှံ ရှိ လူထောင်ပေါင်းများ စွာ က အစိုးရ ၏ OIC ရုံး ကို လက်ခံ ခြင်း ကို ကန့် ကွက် ဆန္ဒပြ | Freedom News Group
အာဏာရ ပါတီ ၏ ညီလာခံ ကျင်း ပနေ ချိန် တွင် နိုင်ငံ အနှံ ရှိ လူထောင်ပေါင်းများ စွာ က အစိုးရ ၏ OIC ရုံး ကို လက်ခံ ခြင်း ကို ကန့် ကွက် ဆန္ဒပြ
by FNG on October 15, 2012	OIC ၏ ကြန်အင် လက္ခဏာ ဆောင်သည့် မည်သည့် အခြေစိုက် မှု မျိုး ကို မှ မြန်မာ နိုင်ငံ တွင်
ယာယီ ဖြစ်စေ ၊ အခိုက် အတန့်ဖြစ် စေ မပြု လုပ် ရန် ရန်ကုန် ၊ မန္တလေး နှင့် နယ်မြို့ များ တွင် ယနေ့ကျင်းပသည့် ဆန္ဒပြ ကန့် ကွက် ပွဲ သို့ရဟန်း ၊ ရှင်လူ ၊ ပြည်သူ များ ထောင် နှင့် ချီ ၍
တက်ရောက်ကြသည် ဟု FNG မှ သတင်း ရရှိသည်။ ရန်ကုန် မြို့တွင် ဗဟန်း မြို့ နယ် ကြားတောရ လမ်း ရှိ ကြေးသွန်း ဘုရားကြီး ရှေ့ ဉ် စု ရုံး ကြ ပြီး
နောက် ကမ္ဘာ အေး စေတီလမ်း ၊ အလံပြ ဘုရား လမ်း တို့အတိုင်း ဆူးလေ စေတီ တော် ကို ချီ
တက် ပြီး မြန်မာ နိုင်ငံ တွင်း ဉ် OIC အစ္စလာမ် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး အဖွဲ့ရုံးစိုက်ခြင်း မပြု
လုပ်ရန် ကန့် ကွက် ခဲ့ ကြသည် ဟု သိရသည်။ နိုင်ငံ တ၀ှမ်း တွင် အစိုးရ ၏ ဆန္ဒပြ ကန့် ကွက် မှု များ ပေါ်ပေါက် ပြီး နောက် မိနစ် အနည်း ငယ် အတွင်း မှာ ပင် OIC ရုံး ကို ဖွင့်လှစ် ရန် ခွင့် ပြု တော့ မဟုတ် ကြောင်း သမ္မတ ရုံး ၏ အင်တာ
နက် စာမျက် နှာ တွင် ဖော်ပြ ခဲ့ သည်။
ဦးသိန်းစိန် အစိုးရ အဖွဲ့၏ OIC ရုံး ဖွင့်လှစ် ခြင်း နှင့် ပတ်သက် သည့် ခွင့် ပြု မှာ ” ရှေ့ နောက်
မျှော်မြင် စဉ်းစား သည့် လုပ် ဆောင် ချက် မဟုတ် ” ဟု ဆန္ဒပြ မှု တွင် ပါဝင် သူ တစ်ဦး က ထောက်
ပြ သည်။ သူက ဆက်ပြီး နာဂစ် တုန်း က တောင် အမေရိကန် ကူညီပါမယ် ဆိုတာ တောင် လက်
ခံ ပြီး မ၀င် ခိုင်း တာ အခု မှ OIC ကို လက်ခံ တယ် ဆိုတော့ လွန်တာ ပေါ့ ” ဟု ဆိုသည်။ မန္တလေး မြို့တွင် အိမ်တော်ရာဘုရားဝင်းမှစတင်၍၄င်း၊ ပခုက္ကူမြို့တွင် ဗောဓိမဏ္ဍိုင်ကျောင်းတိုက်မှ
သံဃာတော်အင်အား၂၀၀၀ကျော်စတင်၍၄င်း၊ ရခိုင်ဒေသတွင် ကျောက်တော်မြို့၊ ပုဏ္ဍားကျွန်းမြို့၊
ဘူးသီးတောင်မြို့၊ ရသေ့တောင်မြို့စသောမြို့ နယ် များ တွင် လည်း OIC ရုံး ကို ယာယီ ဖြစ်စေ
ခဏ ဖြစ်စေ ဖွင့်လှစ် ရန် သဘောမတူ ကြောင်း ဆန္ဒပြ ခဲ့ ကြ သည်။
ကို ကျော်စွာ မြင့် မှတ်တမ်းတင် ရိုက် ကူးထား သည့် ဓာတ် ပုံ များ ကို သူ ၏ Facebook စာမျက်
နှာ မှ တစ် ဆင့် ကူး ယူဖော်ပြ ပါသည်။ ပုခုက္ကူ တွင် ဆန္ဒပြ မှု မှတ်တမ်း ဓာတ် ပုံ များ မှာ Jpaing ရိုက်ကူးထားခြင်း ဖြစ်သည်။
Burma blocks OIC office as monks protest (news.com.au)
From: သတင်း, သတင်းဓာတ်ပုံ, ပြည်တွင်းသတင်း	← O.I.C. ကို ဘယ်လို ရင်ဆိုင် ရမလဲ
OIC အလိုမရှိ ဆန္ဒထုတ် ဖော်မှု ကို မန္တလေး တွင် ကျင်းပ →
O.I.C. ဆီး၇ီးယာ ကို သွားပါ၊ အစ္စလာမ် ချင်းပြသာနာ ကို ရှင်းပါ။ ။
October 15, 2012	Comments are closed.
FNG Facebook PageTotal Visitors:Since 16 December 2008	9,508,870 hits
TMZ is reporting that Fast N Furious star Paul Walker has died incar crash in Santa Clarita,CA tinyurl.com/nvxfgfg http://t.co/IjJ9LQwd4z4days ago
Follow @freedomnews_usFNG ၏ သတင်း နှင့် ဖော်ပြ ထား မှု များ ကို ပြန်လည် ဖတ်ရှုရန် Select Month December 2013 November 2013 October 2013 September 2013 August 2013 July 2013 June 2013 May 2013 April 2013 March 2013 February 2013 January 2013 December 2012 November 2012 October 2012 September 2012 August 2012 July 2012 June 2012 May 2012 April 2012 March 2012 February 2012 January 2012 December 2011 November 2011 October 2011 September 2011 August 2011 July 2011 June 2011 May 2011 April 2011 March 2011 February 2011 January 2011 December 2010 November 2010 October 2010 September 2010 August 2010 July 2010 June 2010 May 2010 April 2010 March 2010 February 2010 January 2010 December 2009 November 2009 October 2009 September 2009 August 2009 July 2009 June 2009 May 2009 April 2009 March 2009 February 2009 January 2009 December 2008 FNG LATE NIGHT SHOW Myanmar News in EnglishMyanmar's president asks Philippines for more aidUndergrads return to crumbling Myanmar universityMyanmar to allow foreign banks to begin some operations next yearMyanmar's president calls for more investment, development aid from PhilippinesSpecial Report: Thailand secretly supplies Myanmar refugees to trafficking ringsUS seeks greater Myanmar military trainingMyanmar still enlists boy soldiers despite reformsICRC trains surgeons in restive MyanmarWant Burma info in your inbox each morning?